Tinye ego na Klaviyo's Ecommerce Marketing Automation Taa Tupu Oge Ezumike Ezumike | Martech Zone
N'ime afọ gara aga, echere m ọrụ dịịrị ndị ahịa maka azụmaahịa ecommerce iji bulie ahịa ha. Achọpụtara m akụkụ ọ bụla nke saịtị ecommerce ha - na nke a, Shopify. Edegharịrị m ndebiri, mejupụta mmemme ụgwọ ọrụ, gbakwunye nnyefe mpaghara, were foto ngwaahịa ọhụrụ, ihu akwụkwọ ngwaahịa emelitere… ma mụbaa ọnụọgụ ntụgharị ha ọnụọgụ abụọ.
Ozugbo m nwere ike ijide n'aka na saịtị ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa ọrụ nke nnyefe na-arụ ọrụ, Achọrọ m ịrụ ọrụ na ịba ụba ego zuru ezu. Imejuputa azịza akpaaka nke na-eziga ozi ma ọ bụ ziga ndị ahịa ozi ma gbaa ha ume ka ha mezue zụọ ma ọ bụ rata ha ịmalite iwu ọhụrụ dị oke mkpa.
O di nwute, ngwa ndi Shopify enweghi ebe a. Shopify nwere ikike ịhazi ụfọdụ ịhapụ ụgbọ ahịa na ozi ịntanetị ndị ọzọ - mana enweghị ọgụgụ isi ma ọ bụ akụkọ siri ike gbara ha gburugburu. Dịka ọmụmaatụ, enweghị m ụzọ nkewa na izipu onyinye na-adabere na akụkọ nzụta ma ọ bụ njirimara ndị ahịa ndị ọzọ.
Klaviyo Ecommerce Marketing akpaaka
Mgbe m mechara nyocha na ntanetị, m kpebiri ịnwale Klaviyo. N'ime otu elekere, agbanwetara m ahịa ọkọlọtọ azụmaahịa na-aga ịnabata ndị ahịa ọhụrụ, ndị na-eme nchọgharị gbahapụrụ ndị na-etinyeghị ihe na ụgbọ ahụ, ndị ahịa na-azụ ahịa ịzụ ahịa, mmeri ndị ahịa, na ire ere / ire ahịa ahaziri iche na izipu.
Mmekọrịta Klaviyo na Shopify dị egwu. O nwere ike ijikọ Shopify ma gbarie data ndị ahịa niile, wee mepụta ọtụtụ mmiri kachasị mma ozugbo. N’ọnwa mbụ, nkwukọrịta ozi m mepụtara ma wuo site na iji draịva & dobe editọ email (Shopify enweghị otu) nloghachi na ntinye nke 2286% nke ụgwọ nke usoro. Mba… Anaghị m egwu egwu ebe ahụ.
Njikọ nke Klaviyo na Shopify na-enye anyị ohere ịmepe nke ọma na ịrụ ọrụ nke ọma nke ahịa ahịa dijitalụ anyị ma ọ bụ nkewa omume na ndị na-azụ ihe oge niile, ọgbọ mbu ma ọ bụ akpaghị aka
Mike, Bobo's Brand Manager
Iji Klaviyo na Shopify, ị nwere ike bido izipu ozi nke onwe, nke ka-ezubere iche banyere nke sekọnd. Klaviyo na-anakọta na-echekwa data niile dị mkpa gbasara ndị ahịa gị ka ị nwee ike iji ya nyefee ahụmịhe echefu echefu, mee ka ahịa ndị ọzọ nwee mmekọrịta, ma mepụta mmekọrịta siri ike.
Klaviyo si Shopify Ecommerce Integration Gụnyere
Dashboard - Gafere akụrụngwa ahịa, Klaviyo na-enye dashboard e-commerce siri ike nke zuru oke ma na-enye nkọwa niile nke ụlọ ahịa Shopify gị n'oge.
Ahịa akpaaka ahịa - Ihe na-akpalite na-adabere na ụbọchị, ihe omume, ndepụta ndị otu, ma ọ bụ ndị otu ma jiri mgbawa, nzacha, ule A / B, na ndị ọzọ iji nwaa ma bulie. Bido ngwa ngwa site na ọbá akwụkwọ nke Shopify-kpọmkwem akpaaka na email ndebiri.
Laghachite na Nkọwapụta Ngwaahịa - Site na ngwaahịa ngwaahịa abụghịzị ire ere furu efu. Kwe ka ndị ahịa denye aha na mgbaàmà mgbe ihe laghachiri na ngwaahịa - ọ dị mfe.
Aro nkeonwe - Ọ dị mfe iji, ntinye ngwa ahịa ntinye-ntọala maka dabere na ndị ahịa na-agagharị, na ịzụta akụkọ ihe mere eme.
Campaigns - Youchọghị izipu akpaaka azụmaahịa, ị nwere ike izipu ozi email ma ọ bụ mkpọsa ozi ederede mgbe ọ bụla ịchọrọ mpaghara ọ bụla ịchọrọ.
Nnwale A / B - Nwalee nnwale isiokwu email na ọdịnaya dị n ’ọfụma n’ ọrụ nrụzi ngwa ahịa.
Mmekọrịta ndị ahịa - Kọwaa ngalaba na-enweghị njedebe. Jiri ihe ọ bụla jikọrọ ihe, profaịlụ Njirimara, ọnọdụ, buru amụma ụkpụrụ, na ndị ọzọ… karịrị oge ọ bụla iche.
Dynamic Kupọns - Ngwa ngwa zigara ndị ahịa gị Kupọns iche iche.
Ibe Mmasị - Ahịa ma hazie ozi email gị na ibe ọkacha mmasị nke ndị ahịa.
Amamịghe echiche - Amụma nke emepụtara na akpaghị aka maka ndụ ọ bụla, ihe egwu, okike, oge izipu kachasị mma, na igbe igbe ahaziri iche nke igbe.
Ecommerce Lifecycle Ahịa - Nyefee ezubere iche, ụdị akara iji wuo ndepụta ahịa gị. Mgbe ahụ, tinye ndị ahịa site na ọtụtụ ọwa ma jiri amụma iji tụọ churn ma ọ bụ lekwasịrị ndị ahịa bara nnukwu uru.
Inyekwu data ngwaahịa - Akpaghị aka mmekọrịta ngwaahịa àgwà ka ndenye ọpụpụ, ịtụ ihe, na katalọgụ ndia.
SMS - Leverage Klaviyo siri ike nkewa na akpaaka iji hazie ozi ederede ọ bụla. Ijikwa nkwenye dị mfe ma na-akpaghị aka iji hụ na ezigara ndị ziri ezi ozi.
Bido na Klaviyo n'efu!
Njikọ Ecommerce Otu Pịa Klaviyo
Klaviyo ejirila ihe karịrị 70 rụọ ọrụ, pịa otu njikọ yana gbakwunye API iji hụ na ị nwere ike nweta data azụmaahịa gị n'ime Klaviyo n'enweghị nsogbu. Ecommerce e mepụtara na teknụzụ dị maka iji bulie gị ma jiri ya na -
Tags: akpaaka na-agana-agagharị ịhapụCLVahịa ndụ uruecommerce aiecommerce akpaakaecommerce cross-ere emaildashboard ecommerceecommerce email mkpọsaecommerce nkewaecommerce nabata emailemail abụrụKlaviyomagentoamụma ịzụrụshopify ab nwaashopify Kupọnsshopify ahịa akpaakaụlọ ahịasms ahịa akpaakamata ngwaahịawoocommerce
Kedu ka eziokwu ga-esi gbasawanye emetụta ahịa Marketing?